PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - Siyodela ngokuboshwa kwabantu ngenkohlakalo
Siyodela ngokuboshwa kwabantu ngenkohlakalo
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Imibono -
EMUVA kokugqoza kokuphenywa kwezinsolo zenkohlakalo kuhulumeni ezithinta umndeni kamengameli wezwe, umnu Jacob Zuma, abanye bongqongqoshe bakhe, umndeni wakwagupta kanye nendodana kamengameli ududuzani, ekugcineni uphiko lwamaphoyisa aphenya amacala abucayi, amahawks, seluthathe izinyathelo ezibonakalayo.
Isinyathelo sokuphenya lolu daba yigxathu elibalulekile ekulweni nenkohlakalo nokwebiwa kwemali yabakhokhi bentela okudlangile ezweni.
Ngolwesihlanu amahawks agasele emahhovisi kandunanankulu wasefree State kanye nasemnyangweni wezolimo eyophenya ngezinsolo zenkohlakalo yokukhishwa kuka-r220 million, yilo mnyango, uxhasa ipulazi elisevrede kulesiya sifundazwe.
Kuthiwa le mali ayisetshenziswanga ukusiza abaswele, kodwa yasetshenziswa ngumndeni wakwagupta, osondelene nomengameli Zuma nendodana yakhe ududuzani.
Lolu phenyo lwamahawks lubucayi kakhulu, njengoba luthinta izikhulu eziphezulu eqenjini elibusayo, okubalwa lowo obengundunankulu efree State, umnu Ace Magashule, osengunobhala-jikelele weqembu elibusayo i-african National Congress (ANC), kanye nongqongqoshe wezokumbiwa phansi kuhulumeni kazwelonke, umnu Mosebenzi Zwane.
Le nkohlakalo kuthiwa yenzeka ngesikhathi laba besaphethe kuhulumeni wasefree State.
Umbuzo osematheni kumanje wukuthi ngabe uzomiswa yini esikhundleni sakhe esisha eqenjini, umnu Magashule, ngesikhathi zisaphenywa lezi zinsolo, noma cha.
Uma iqembu lakhe lingenzi lutho ngalezi zinsolo, lokho kungakha isithombe sokuthi alizimisele ukulwa nenkohlakalo ebhokile eminyangweni kahulumeni.
Okunye okunike ithemba kuleli sonto yisimemezelo sikamengameli wezwe umnu Zuma mayelana nemigomo nemibandela yokusebenza yekhomishini yejaji uray Zondo ezophenya ngenkohlakalo kuhulumeni kulandela izincomo zomvikeli womphakathi waphambilini, u-adv Thuli Madonsela.
Phambilini bekunokwesaba kwabanye ezweni ukuthi imigomo nemibandela ezobekwa nguhulumeni yokusebenza kwekhomishini izokwenza kube nzima ukuba ikwazi ukwenza umsebenzi wayo ngendlela efanele nengenazihibe.
Okwamanje singathi ibambe ngakho impela empini yokulwa nenkohlakalo.
Kodwa siyokholwa ukuthi ngempela amasela aphelelwe yisikhathi mhla abanecala beboshwa, bashushiswe, futhi bajeze ngezenzo zabo.